Thermoforming Mashiinka Baakadaha Dabacsan
Mashiinka baakadeynta jawiga oo la beddelay Thermoforming
Mashiinka baakida maqaarka ee Thermoform
Semi-automatic baakad saxaarad
Calaamadeeye saxaarad otomaatig ah oo joogto ah
Mashiinnada Hanuuninta Rugta Labaad
Makiinadaha Vacuum -ka Rugta Weyn
Nooca Jadwalka Makiinadaha Vacuum
Makiinadaha Vacuum -ka ee Joogtada ah
Makiinadaha Faaruqinta ee Golaha Wasiirada
Cadaadis Machine xirxirida
Albaabka tuubada Xiinka
Xidhmada jawiga la beddelay (MAP)
Xirmada ayaa muhiim u ah badbaadada cuntada
Horumarka dhaqaale ee xawliga ah ayaa horseeday koror aad u weyn oo ku yimid isticmaalka baakadaha ee badeecadaha kala duwan, gaar ahaan wax soo saarka beeraha iyo dhinacyada, cuntada, daawada, iyo qalabka teknoolojiyadda sare. Badbaadada cuntada waa arrin caalami ah. Iyada oo la dardargelinayo magaalaynta, hilib tiro badan ...
Hordhaca noocyada Mashiinnada Thermoforming
Utien Pack Co, .Ltd. waa soo -saare ku takhasusay soo -saarka mashiinnada baakadeynta kuleylka ee otomaatiga ah, mashiinnada kuleyliyaha ayaa heer hoggaamineed ka leh Shiinaha. Isla mar ahaantaana, waxaan sidoo kale aqoonsannay oo aad u ammaanay macaamiil badan oo shisheeye ah. Halkan waxaa ah hordhac kooban oo ku saabsan baabuurka ...
Isbeddelka xirmada, sirta kaydinta dheer
Su'aashu waxay haleelaysay soo -saareyaal cunto oo badan: Sidee loo kordhiyaa nolosha shelf -ka cuntada? Halkan waxaa ah ikhtiyaarrada caadiga ah: ku dar aalko-dilaha iyo wakiilka haynta cusub, baakadaha faaruqinta, baakadaha jawiga oo la beddelay, iyo teknolojiyadda ilaalinta shucaaca ee hilibka. Shaki la'aan, xirmada habboon ...
Raac 4 mabaadi'da aasaasiga ah ee baakadaha si aad cuntadaada caan uga dhigto
Xulashada cuntada Maalmahan, waxaan galnay xilli cusub oo wax la cuno, cuntada mar dambe ma aha in caloosha la buuxiyo, laakiin wax badan ayaa ah in la helo qanacsanaanta ruuxiga ah inta lagu raaxeysanayo. Sidaa darteed, marka aad dooranayso cuntada macmiil ahaan, kuwa fiiro gaar ah siiya tayada iyo dhadhanka ayaa si sahlan loo dooran doonaa ...
SIDA BAKERKAAGA LOO SOO JOOJIYO
Iyagoo wajahaya isugeynta badeecooyinka rootiga maanta, soo -saareyaal badan ayaa bilaaba inay adeegsadaan saamaynta baakadaha ee soo -jiidashada sii socota ee macaamiisha. Marka, jihada fog ee horumarinta shirkadaha waa in la kala saaro baakadaha iyo in la naqshadeeyo baakadaha si waafaqsan ...
Waxaa la mid ah baakadaha faaruqinta, sababta baakadani ay caan u tahay?
Baakadaha fakuumku waxay haystaan ​​in ka badan kala bar suuqa baakadaha cuntada. Muddo dheer, baakidhku wuxuu muddo dheer gacanta ku hayey mashiinnada baakidhyada yaryar. Shaqada gacanta ee soo noqnoqota oo aad u yar oo culus ayaa adkeyneysa in la gaaro wax soo saar ballaaran. Waa se ...
Diyaar ma u tahay cuntada diyaarka ah?
-Haa, waqtiga qadada. Aan tagno waxoogaa cunto ah! -KALOO. Xagee la aadaa? Maxaa la cunayaa? Ilaa intee… -Ilaahayow, joogso, maxaad u eegi weyday app -ka oo aad wax uga dalban lahayd onlayn? -Fikrad wanaagsan! Taasi waa hadal caadi ah oo ku saabsan laba nin oo ku wareersan cuntada xigta. Waqtiga nolosha deg-degga ah, cuntada diyaarka ah ayaa sii kordheysa oo m ...
UTIEN PACK wuxuu soo bandhigayaa Heerkiisa Cusub ee Baakadaha MAP
Baakadaha jawiga ee la beddelay: fidinta muddada kaydinta ee badeecadaha Maalmahan dadku waxay sii kordhayaan baahida loo qabo xallinta dhibaatada ilaalinta cuntada iyo dhibaatooyinka la xiriira. Sidoo kale, waxaa jira noocyo kala duwan oo baakado ah oo iibsadayaashu ku dooran karaan suuqa. Shaki kuma jiro in aan doorano ...
Khadka baakadaha otomaatiga ah ayaa keenay tusaale wanaagsan oo loogu talagalay wax soo saarka xirfadeed
Sanadihii la soo dhaafay, iyada oo la horumarinayo warshadaha gudaha, ballaarinta joogtada ah ee miisaanka wax-soo-saarka, wax-soo-saarka wax-soo-saarka iyo baahiyaha kale, horumarka degdegga ah ee dhammaan noocyada kala-soocidda xirfadeed ee iswada, caqliga leh, gaar ahaan beer-baakadeedka xoogga badan. Ugu horrayn ...
Khadka soo -saarka baakadaha otomaatiga ah ayaa laga yaabaa inuu noqdo isbeddel cusub mustaqbalka
Iyada oo baahida sii kordhaysa ee macaamiisha, kaliya tayada iyo waxqabadka badeecadaha ayaa looga baahan yahay inay noqdaan kuwo aad u adag, laakiin sidoo kale saxnaanta qiyaasta baakadaha iyo quruxda muuqaalka baakadaha ayaa looga baahan yahay inay ahaadaan kuwo shaqsiyeed. Sidaa darteed, horumarka degdegga ah ee mashiinnada baakadaha ...
255 Wadada Shuguang, Aagga Warshadaha Kebei, Shaoxing, 312081, Shiinaha